को जामुन साइटहरूमा हरेक माली बढ्न। जाम र compotes खाना पकाउनु ठूलो परिमाणमा तिनीहरूलाई बढ्दै कसैले एउटै संस्कृति अन्तर्गत अरूलाई आफ्नो आफ्नै बगैचा बाट गर्मी जामुन मा खान मात्र एउटा सानो क्षेत्र छुट्याइयो। आदर्श स्वाद र राम्रो fruiting तर माली को इच्छा एउटा कुरा मा सहमत छु। हाल सामान्य स्ट्रबेरी पहिले नै टाढा सार्दा गर्दा, त्यहाँ स्ट्रबेरी remontant, अर्थात्, जुलाई मा fruiting सुरु कि एक, धेरै प्रजातिहरू छन्, र चिसो सम्म जारी छ। तर सबैभन्दा भाग लागि यी प्रजातिहरू ठूलो फल र राम्रो स्वाद फरक छैन। Remontant स्ट्रबेरी "Wim-चौडाइ" माली को समीक्षा लागि, एक अपवाद छ। यो रसदार गुलियो र बरु ठूलो छ। विवरण स्ट्रबेरी प्रजातिहरू "Wim-चौडाइ", नियमहरूमा र खेती अभ्यासहरू हामी यो प्रकाशन राख्नु समीक्षाएँ।
बुश को विशेषताहरु
यो विविधता पहिले नै हुनत यो हल्याण्ड, सुरुवातकर्ता Vissers Aardbeiplanet को brainchild देखि एक नवीनता मानिन्छ, रूसी माली राम्रो ज्ञात छ। ब्रश सामान्य किनाराको साथ गाढा हरियो रंग को धनी पत्ते र बलियो ribbing संग फैलाउने, शक्तिशाली र बलियो बढ्न। पातहरु ठूलो छ, अलिकति wrinkled छन्। त्यसैले यसलाई सम्हाल्न सजिलो छ Usoobrazovanie ब्रश, औसत।
स्ट्रबेरी "Wim-चौडाइ", फूल, सेतो ठूलो छ (समीक्षा र वर्णन यस लेखमा उपलब्ध छन्) torsion को अभाव छ। पातहरु को कि जस्तै स्तर मा स्थित औसत बालाको। पराग पहेंलो। फूल एक बेहोश गंध exude।
फल र palatability को विवरण
स्ट्रबेरी प्रजातिहरू "Wim-चौडाइ", सबै remontant किसिमहरु देखि धेरै फरक धेरै छन् जो को, माली, को राय मा। यो एक, उज्ज्वल मीठो र अमिलो स्वाद, रसदार र flavorful संग endowed छ। मध्यम र जामुन अन्य यस्तै प्रकारका यी सबै सूचकहरू टेस्टिङ कुनै 4.8 कम भन्दा अंक (एक पाँच-बिन्दु मात्रा मा गणना) स्कोर वर्णन छन्। प्रजातिहरू विवरण टिप्पणीहरू शरीरका, दृढ मीठो छ भनेर लेखिएको छ मा, बीउ सानो र लगभग imperceptible छन्। जामुन तिनीहरूले स्वादिष्ट बरकरार, जाम, compotes बनाउन एक उत्कृष्ट मिठाई हुन सक्छ। जामुन घनत्व यो लामो दूरी भन्दा ठूलो परिमाणमा सजिलै ओसारपसार गर्न अनुमति दिन्छ। प्रस्तुति तिनीहरूलाई बिगार्छ छैन, एक ओछ्यानमा देखि बस संकलित रूपमा तिनीहरू सुन्दर छन्।
स्ट्रबेरी "Wim-चौडाइ" - त्यसैले remontant, र धेरै माली यसको ठीक कि फल विचार गर्नुहोस्। को ब्रश यसको प्रकारको बहिष्करण यस प्रकारको एकदम ठूलो जामुन बढ्न। फल remontant प्रजातिहरू को सबै भन्दा ठूलो हो, र मात्र तरिका दिन सक्छ गर्न "रानी एलिजाबेथ"। प्रति बेरी वजन "Wim widths" 50 ग्राम भन्दा बढी हुन सक्छ। पाकेको फल उज्ज्वल रातो, छाला चमकदार, चोटीदार आकार छ, जो, सारा बेरी जस्तै रंग हुन पूर्णतया पाकेको गर्दा घाँटी छ।
climatic शर्तहरूमा मिलाइएको
स्ट्रबेरी सबैभन्दा जाडो-हार्डी प्रजातिहरू मध्ये एक "Wim-चौडाइ" छ। समीक्षा माली यो राम्रो सहन र चिसो चिसो छ कि दाबी गर्छन्। अक्सर एक फिलिम ग्रीनहाउस रूपमा चिसो मौसम आश्रय सिर्जना गर्न माली हेरचाह। तिनीहरूले यो "घर" अनुमति दिन्छ स्ट्रबेरी पनि नोभेम्बर सम्म फल फलाउन मंचों लेख्नुहोस्। harming भविष्यमा बाली सानो हिउँ संग जाडोयाम भोग्नेछन् बिना ग्रीनहाउस shrubs अन्तर्गत।
माली पनि स्ट्रबेरी 'Wim-चौडाइ "पूर्ण सूखी सिजन अनुकूल छ कि एक समीक्षा मा लेखे। यो एक लामो समय को लागि सामान्य माथि गर्मी र गर्मी सहन गर्न सजिलो, चलिरहेको छ। क्रप ग्रस्त गर्दैन, जामुन उचित हेरविचार संग सुकेको छैन।
उपज लागि, यो स्ट्रबेरी यसको स्थिर प्रजनन प्रसन्न। प्रति हेक्टर 85 भन्दा बढी quintals सङ्कलन गर्न सम्भव कृषि प्रविधि को नियम विषय।
स्ट्रबेरी "Wim-चौडाइ" राम्रो, उर्वर माटो, ध्यान दिएर तयार र प्रक्रियामा छ जो आवश्यक छ। कारण fruiting remontant र धेरै लामो पनि सबै भन्दा राम्रो माटो चाँडै समाप्त पाइहाल्छन् भन्ने तथ्यलाई गर्न, एक स्थिर समृद्ध माटो र नियमित fertilizing आवश्यक छ। साथै, बढ्दो स्ट्रबेरी "Wim-चौडाइ" को प्रक्रिया मा, यो आवश्यक समय देखि किरा र रोगहरु को उपस्थिति को लागि ब्रश र माटो निगरानी गर्न समय छ। Greenhouses र Greenhouses मा हुर्केका हुँदा रोकथाम लागि बाहिर उपचार लगे गर्नुपर्छ।
तपाईं अधिकतम उपज प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, वर्णन प्रजातिहरू को रोपण को सूर्य साइट द्वारा राम्ररी उज्यालो जोड दिइएको छ। सूर्य मा हुर्केका जामुन, वृद्धि कि र छाया मा ती ripened भन्दा धेरै ठूलो र sweeter हुनेछ।
कृषि प्रविधी कडाई अवलोकन गरिएको छ भने, यो तपाईंको उत्पादकत्व बेरी ब्रश रिज र प्रजनन विस्तार गर्न सम्भव छ। नियमहरूमा अनुपालन न्यानो मौसम भर मनोरंजन हुनेछ जो एक स्थिर, उच्च पैदावार, मा हुनेछ। डच प्रजातिहरू ख्याल पनि जटिल छैन, र तपाईंले यी नुस्खे पालना गर्न मात्र आवश्यक:
बढ्दै स्ट्रबेरी लागि सबै भन्दा राम्रो ठाउँ कम अम्लता र मध्यम alkalinity संग loamy र बलौटे-loam soils छन्।
स्ट्रबेरी waterlogged वा parched भूमि छोड्न, त्यसैले पानी को नियम पालन गर्दैन।
माटो पनि अम्लीय छ भने, यो निष्प्रभावी गर्नुपर्छ। यो गर्न, रोपण अघि वर्ष साइट मा एक Liming बनाउन।
क्षेत्र स्ट्रबेरी, गहिरो-खनाइ को रोपण लागि विनियोजन। Shatters सबै गांठ को पोषक अधिकांश लिन जो हुनेछ टाढा सामा को जरा, हटाइएका छन्।
को स्ट्रबेरी वसन्त मा लगाएको गरिनेछ भने, पकाउने क्षेत्र गिरावट हुनुपर्छ। हामी शरद ऋतु मा ब्रश रोपेर जाँदैछन् भने, मंच रोपण अघि दुई वा तीन हप्तासम्म तयार गर्न सकिन्छ।
तपाईं तुरुन्त खाद यसलाई आवश्यक माटो को गहिरो खनाइ को प्रक्रिया मा। यो प्रत्येक मीटर (वर्ग) को लागि शुरू मल वा खाद हालन को छ किलोग्राम गरेको छ (मल decomposed हुनुपर्छ), डबल superphosphate (35 ग्राम) र पोटासियम क्लोराइड वा सल्फेट 20 ग्राम।
फलस्वरूप, माटो सिद्ध जल उपस्थिति संग, सजिलो प्राप्त गर्नुपर्छ। रोपण shrubs निम्न माप संग गरिन्छ: पङ्क्तिहरू कम्तिमा सत्तरी सेन्टिमिटर हुनुपर्छ बीच र ब्रश बीच - कुनै चालीस भन्दा कम।
जो मा तपाईं स्ट्रबेरी रोपेर पनि भिजेको योजना देशमा भने, तपाईं व्यापक 80 सेन्टिमिटर एक रिज सिर्जना र Mustio दुई पङ्क्ति तिनीहरूलाई लगाए गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो ridges बीच दूरी तीस चालीस गर्न सेन्टिमिटर हुनुपर्छ।
प्रत्येक बोट लागि पूर्ण मूल मुर्दा गाड्नु गर्न सक्षम हुन एक प्वाल यो आकार खन्नुहोस्, तर यो cervix को सतह मा छोड्नु आवश्यक छ। रोपण पछि धेरै पानी प्रत्येक झाडी आवश्यक छ। सिधै झाडी मुनि पानी खन्याउनु, भनेर बसे ड्राई वरिपरि माटो। यो सामा को प्रशस्त वृद्धि रोक्न, को जरा जो कुनै पनि मामला मा जमीन मा रहन मदत गर्नेछ, र अङ्कुराउन निश्चित हुन।
टीन गर्दा पीट वा धरण प्रयोग mulching बनाउन आवश्यक छ। गीली मानक रकम आयातित गर्नुपर्छ - तीन पाँच सेन्टिमिटर देखि।
यो विविधता ठूलो ठंडा ल्याउँछ, त्यसैले त्यहाँ धेरै माली जस्तै, ब्रश कागज वा फिलिम रोपण पछि ढाक्न कुनै आवश्यकता छ।
को ग्रीनहाउस मा नै तरिका लगाए स्ट्रबेरी "Wim-चौडाइ" मा। बगैंचामा तपाईं बढ्नेछ जामुन खुला क्षेत्रमा भन्दा धेरै अब छन्।
पैदावार तपाईं उनको स्ट्रबेरी हेरचाह कसरी निर्भर हुनेछ। सिद्ध वृद्धि, fruiting र पकने निम्न कार्यहरू गर्न आवश्यक छ:
पानी प्रशस्त, तर दुर्लभ आवश्यक छ। कुनै वर्षा थियो र ब्रश अन्तर्गत जमीन बाहिर सूखी भने, पानी प्रशस्त खन्याउन। अर्को हजारी सुकाएपछि फेरि बाहिर छ।
तपाईं बस shrubs लगाए र लाउने यो सिजन आवश्यकता छैन कि सबै नियम द्वारा जमीन fertilized भने। तिनीहरूलाई मात्र अर्को वर्ष बनाउन सुरु गर्नुहोस्।
स्थिर weeding उच्च पैदावार र ठूलो फल नेतृत्व थियो।
पंक्ति बीच जमीन loosen निश्चित हुनुहोस्।
बाहिर तालिका निवारक मर्मतका मा प्रक्रिया पूरा गर्न मा, किरा वा रोग आक्रमण ब्रश नभएसम्म प्रतिक्षा नगर्नुहोस्।
स्ट्रबेरी "Wim-चौडाइ" छैन चार अधिक वर्ष को लागि एक क्षेत्रमा हुर्केका गर्नुपर्छ। यो पृथ्वीको devastation, तर atakovaniya ब्रश विभिन्न किरा एक ठूलो जोखिम संग मात्र होइन कारण छ। रोगहरु गर्न सबैभन्दा प्रतिरोधी विविधता एक स्ट्रबेरी "Wim-चौडाइ" छ। यो समीक्षा माली पुष्टि, तर अझै पनि अनुभव माली निवारक मर्मतका पूरा गर्न सल्लाह छन्। तपाईंको shrubs छक्क परे भने, यो कसरी शत्रु सामना गर्न जान्न आवश्यक छ।
प्रभावित botrytis ब्रश हटाइएका छन् र बाँकी समाधान त प्रशोधन छ: पानी को दस लिटर तरल साबुन र तामा oxychloride दुई चमचा भंग गर्न आवश्यक लागि;
, सेतो खैरो र खैरो समाधान spotting botrytis देखि जस्तै उपचार गरिन्छ, तर पानी दस लिटर मा सामाग्री चमचा थपिएको छ;
निम्नानुसार ब्रश slugs, घोंघे र centipedes बसे भने, र आफ्नो फसल काखमा सुरु, प्रशोधन खर्च: न्यानो पानी दस लिटर तरल साबुन को दुई चमचा, खरानी काठ र devyatiprotsentnogo सिरका, तीन चमचा जल तेल नै रकम भंग। यो संरचना ब्रश र जमीन स्प्रे। क्रममा सेप्टेम्बर (दोस्रो आधा) मा नै उपचार रोक्न।
स्ट्रबेरी "Wim-चौडाइ": समीक्षा
जनसंख्याको बहुमत केन्द्रीय क्षेत्रमा बसोबास रूपमा यो किसिम, रूस को धेरै रुचाउनु छ, जहाँ लेट वसन्त र प्रारम्भिक शरद ऋतु। यी क्षेत्रहरु मा, सबै भन्दा भाग को लागि, र "Wim रीना" विकास स्ट्रबेरी। समीक्षा कि जामुन साँच्चै स्वादिष्ट, रसदार भन्छन्। विविधता, धेरै unpretentious छ स्थिर र उच्च उपज दिन्छ। माली तिनीहरूले जाम स्वादिष्ट र धेरै सुगन्धित फल पेय छ भनेर भन्न, यो बढ्न सुझाव दिन्छौं।
आफ्नो गर्मी घरेलु मा जापानी आलुबखडा: रोपण र हेरविचार
Raspberries कसरी प्रोपेगेट गर्न? बढ्दै raspberries
अप्रिल मा मत्स्य पालन। कहिले र कस्तो माछा राम्रो छ?
अङ्गुर galahad, यसको लाभ र प्रजनन nuances
अविस्मरणीय अभिनेता। "द नग्न गन" - को निरर्थक एक कमेडी